बालबालिकालाई सुमार्गमा डोहोर्याउने काइदा – मझेरी डट कम
बन्द सत्रमा भने खुला सत्रमा प्रस्तुत वैयक्तिक समीक्षात्मक प्रतिवेदन बारे टीकाटिप्पणी गर्ने र प्रमुख अतिथिलाई साक्षी राखी परिवारका सदस्यहरूको वैयक्तिक आचार संहिता÷प्रतिबद्धता समेटिएको सामुहिक रूपमा नयाँ प्रतिवेदन निर्माण हुन्छ । सबैले हस्ताक्षर गरी प्रतिवेदन फाइलिङ गर्नु पर्दछ । प्रतिवेदनमा समेटिएका प्रतिबद्धताहरू पालना गरे नगरेको बारे आउँदो सभाले मूल्याङ्कन गर्ने छ ।
मैले परिवारका सदस्यहरूको खानपिन, सरसफाई र रेखदेखको कार्य जिम्मेवारीका साथ समापन गरेकी छु । जेठी छोरी कमलालाई सभा सञ्चालन र पढाइ–लेखाइमा पर्याप्त मार्गनिर्देश गरेकी छु । कमजोरी पक्ष नभएका होइनन् । मेरो अर्को जिम्मेवारी स्वाध्यायन गर्नु थियो । ‘आजको साप्ताहिक’, ‘शिक्षक’, ‘मधुपर्क’ र ‘गरिमा’ जस्ता शैक्षिक÷साहित्यिक पत्रिका अनि केही उपन्यास पढ्नमा समय दिए पनि मैले शिक्षा सेवा आयोगको तयारी गर्ने सन्दर्भमा उचित ध्यान दिन सकिनँ । पटक–पटक छोरीहरू कमला र कुसुम आफ्नो दायित्वबाट पन्छिदा भने ठिक मार्गमा ल्याउने उद्देश्यले मानसिक कसरत गर्नुपर्यो । यद्यपि मानसिक÷शारीरिक दण्ड भने विल्कुलै दिएको छैन ।
कविता– (कमलातिर हेर्दै) ल, ल ! तिमीलाई खेल्ने, लेखपढ गर्ने र टेलिभिजन हेर्ने समय तोकिदिन्छु । त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्न पछि नपर्नु नि ? सम्भव भएसम्म अबदेखि म पनि तिमीसँगै बसेर पढ्छु, हुन्न ? (कमला स्वीकारोक्तिस्वरूप टाउको हल्लाउँछिन् ।) म्याथ सुधार्न भोलिदेखि नै म्याथ सरकहाँ ट्युशन पढ । यस बारे म पनि उहाँसँग छलफल गर्छु ।